अजीमुथ, उचाई, र हेडि।। आकाशमा ताराहरु मापन गर्न सिक्नुहोस् | नेटवर्क मौसम विज्ञान
अवलोकनको लागि धेरै नक्षत्र सामान्य रूपमा रातको आकाश र उच्च गुणवत्ताका तस्बिरहरूको उत्पादनको रूपमा, यसका अवधारणाहरू जान्नु महत्त्वपूर्ण छ अजीमुथ र उन्नयन। त्यो पोष्टको विषय हो। तपाईंले अजीमुथ के हो भनेर जान्नुपर्दछ र यो के हो जुन तपाईं सूर्य र चन्द्रमा एकै समयमा देख्न सक्नुहुनेछ वा आकाशमा केही नक्षत्रहरू फेला पार्न सक्नुहुनेछ।
यस पोष्टमा हामी तपाईंलाई अझैमिथ र यसको प्रयोग कसरी गर्ने बारे सबै कुरा सिकाउँदछौं।
1 अजीमुथ भनेको के हो?
2 एलिभेसन भनेको के हो?
3 एजीमुथ र टोपोग्राफीमा असर
4 मापन उपकरणहरू
अजीमुथ भनेको के हो?
दुबै एजीमुथ र एलिभेसन दुई निर्देशांक हुन् जुन केन्द्रित छन् आकाशमा दिव्य शरीरको स्थिति परिभाषित गर्दछौं जब हामी यसलाई एक विशिष्ट स्थानबाट अवलोकन गर्दछौं र निश्चित समयमा। त्यो हो, सूर्य, चन्द्रमा वा अर्को तारा कुनै पनि समय हुनेछ भन्ने स्थिति जान्नको लागि यसलाई प्रयोग गर्न प्रयोग गरिन्छ, जुन हामी आफैंमा पाउँछौं। यदि हामी चाहन्छौं, उदाहरणका लागि, आकाशमा केही नक्षत्र कल्पना गर्न को लागी महान भालु हामी केही ताराहरू खोज्न सक्छौं जुन हामीलाई उनीहरू पत्ता लगाउन अनुमति दिन्छ। यो गर्न, हामी उन्नयन र अजीमुथ प्रयोग गर्दछौं।
धेरै फोटोग्राफरहरू यी निर्देशांकहरू चौडा दिनमा चन्द्रमाको स्थिति पत्ता लगाउन प्रयोग गर्दछन् र एकै समयमा आकाशमा दुबै आकाशीय पिण्डहरूको अविश्वसनीय फोटोहरू लिन्छन्। आकाशमा सूर्य र चन्द्रको स्थिति अजीमुथ र उचाई द्वारा परिभाषित गरिएको छ।
अजीमुथ कुनै पनि आकाशीय शरीर उत्तरले बनाएको कोण भन्दा बाहेक अरू केही छैन। यो कोण घडीको दिशाबाट र पर्यवेक्षकको क्षितिजको वरिपरि मापन गरिएको छ। तसर्थ, हामीले आफुलाई भेट्ने अवस्था आकाशीय शरीरको स्थिति निर्धारण गर्न महत्वपूर्ण छ। यी निर्देशांकहरूले आकाशीय शरीरको दिशा निर्धारण गर्दैन। यदि हामीले उत्तरमा आकाशीय पिण्ड मापन गरेका छौं भने, हामी यो देख्दछौं कि यसको ० ° डिग्री अजीमथ छ, एउटा पूर्व0० °, एक दक्षिण १ 90० ° र पश्चिम २ 180० °।
त्यहाँ मोबाइल अनुप्रयोगहरू छन् जुन सूर्य र चन्द्रमाको उचाइ र अजीमुथको बारेमा जानकारीहरू बचत गर्दछ बिभिन्न मिति र समयहरू जुन हामी हेर्न चाहन्छौं। यो सामान्यतया समय मा अजीमुथ र उन्नयन रेखाको नक्शा द्वारा प्रतिनिधित्व हुन्छ।
एलिभेसन भनेको के हो?
जब हामी उचाईको कुरा गर्छौं तब हामी प्रश्नमा रहेको आकाशीय पिण्ड र निरीक्षकले देखेको क्षितिजको बीच ठाडो कोणको दूरीलाई संकेत गर्दैछौं। TO यसलाई पर्यवेक्षकको स्थानीय प्लेन भनिन्छ। भूमि स्तरमा अवलोकनकर्ताका लागि सूर्यको उचाइले कोण बनाउँदछ जुन क्षितिजको साथ यसको ज्यामितीय केन्द्रको दिशा बनाउँदछ जुन हामीले त्यो स्थितिमा अवलोकन गर्छौं।
उदाहरणको लागि, सूर्य वा चन्द्रमाको उचाई १२ डिग्रीमा हुन सक्दछ जब यसको ज्यामितीय केन्द्र १२ डिग्रीको क्षितिज भन्दा माथि छ जुन हामी हामी रहेको स्थानबाट देख्छौं। यदि तपाईं यो फोटो लिन चाहानुहुन्छ भने तपाईंले सूर्य वा चन्द्रमाको स्थितिलाई ध्यानमा राख्नुपर्नेछ र तपाईंले उचाइ गणना गर्नुपर्नेछ। यी प्रकारका फोटोहरूका लागि यो सब भन्दा गाह्रो कदम हो। अजीमुथ र एलिभेसनको अवधारणाहरू ह्यान्डल गर्न सिक्नको लागि वास्तविक उदाहरणहरूको अध्ययन हेर्नु राम्रो हुन्छ।
एजीमुथ र टोपोग्राफीमा असर
यी अवधारणाहरू स्थलाकृति र भौगोलिक जगतमा लागू भएका अर्को प्रयोगहरू। कोर्स एक हो उत्तर वा दक्षिण र दक्षिणावर्त वा काउंटरक्लवाइजबाट उपायहरू। यद्यपि यो 90 ० डिग्री सम्म मात्र मापन गर्न सकिन्छ।
दुबै असर र अजीमुथ अध्ययनको यस क्षेत्रमा एक अर्कासँग नजिकको सम्बन्ध छ। यी अवधारणाको भिन्नता देख्न सकिन्छ कि रेखाको अजीमुथ असर मात्र थाहा पाएर मात्र गणना गर्न सकिन्छ, तर यसको विपरित होईन।
तपाईले रेखाको मूल्य निर्धारण गर्न कोशिस गर्न सक्नुहुनेछ जुन कुनै पनि दुई बिन्दुमा सम्मिलित हुन्छ, जबसम्म हामी उत्तर र पूर्वको निर्देशांकहरू जान्दछौं। त्यहाँ एक सूत्र छ जबसम्म अजीमुथ पहिलो क्वाड्रन्टमा छ:
यस सूत्रमा, डेल्टा भनेको आगमन पोइन्टको पूर्वको निर्देशांक र सुरूवात बिन्दुको पूर्वका बीचको भिन्नता हो। चतुर्भुजको स्थिति जहिले पनि खातामा राख्नुहोस् जुन Azimuth छ।
क्वाड्रन्ट र क्रसबो दुई उपकरणहरू हुन् जुन आकाशमा ताराहरू अवलोकन गर्न प्रयोग गरिन्छ। क्वाड्रन्ट क्षितिजको ताराहरूको उचाइ गणना गर्न प्रयोग गरिन्छ। यदि हामी सूर्य कत्तिको अग्लो छ भनेर जान्न चाहन्छौं भने हामी यसलाई होशियारीका साथ हेर्नुपर्दैन वा हाम्रो आँखालाई नोक्सान पुर्‍याउँछ।
जब तपाईं सूर्यमा क्वाड्रन्टसँग ध्यान केन्द्रित गर्नुहुन्छ, तपाईं देख्न सक्नुहुन्छ कि कसरी प्रकाशको किरणहरू यसलाई मार्फत प्रवेश गर्दछ र अनुमान गरिन्छ। त्यो जब तपाईलाई थाहा हुन्छ कि यो पूर्ण रूपमा उहाँसँग संरेखित छ। एक पटक तिनीहरू पigned्क्तिबद्ध भएपछि, हामी क्वाड्रन्टमा पढ्ने बनाउँछौं र त्यो हो क्षितिजको माथि सूर्यको उचाई।
र के भए भने क्वाड्रन्ट भित्र छिर्न कुनै घाम छैन? केहि हुँदैन। राती यो तारा पत्ता लगाउन र यसको उचाइ जान्न प्रयोग गर्न सकिन्छ। उही प्रक्रिया पछ्याईएको छ, तर यस अवस्थामा तपाईं प्रत्यक्ष तारामा हेर्न सक्षम हुनुहुनेछ, यसमा केन्द्रित हुनुहुनेछ र चतुर्भुज हेर्नको लागि यो कुन उचाइ हो भनेर जान्न सक्नुहुनेछ।
अर्कोतर्फ, दुई तारा बिचको कोणीय दूरी थाहा पाउन क्रसबो प्रयोग गरिन्छ। तपाईंले आफ्नो टाउको माथि क्रसबो राख्नुपर्नेछ, स्टिक नाकको छेउमा राखेर। हामीले शासकको उत्पत्ति स्टारमा राख्यौं जुन हामी कल्पना गर्न चाहन्छौं र हामी विभाजनको संख्या गणना गर्नेछौं जबसम्म हामी अर्को तारा नाप्न चाहान्छौं जुन हामीले मापन गर्न चाहन्छौं। हामीले प्राप्त गरेको यो संख्या दुई बीचको बिचको डिग्री हुनेछ।
तपाईमले देख्न सक्नुहुने रूपमा, एसिमुथ, एलिभेसन, र हेडि like जस्ता अवधारणाहरू पहुँचको बाहिरका चीजहरू नाप्नको लागि एकदम महत्त्वपूर्ण हुन्छन्। तिनीहरू अनुमान लगाईन्छ उच्च परिशुद्धताका साथ र विभिन्न विज्ञानमा धेरै उपयोगी क्षेत्रहरू, स्थलाकृतिदेखि ताराहरूको अवलोकनसम्म।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » अजीमुत